Google na-agbakwunye Atụmatụ Ekekọrịta Ezinụlọ Ọhụrụ na Kalịnda, Debe, na Foto | Gam akporosis
Google na agbakwunye atụmatụ ezinyere ezinụlọ ọhụrụ na Kalịnda, Debe na Foto
Google gara n'ihu ịgbasa ma melite ọrụ ọ na-enye ndị ọrụ ya, ma na gam akporo ma na nyiwe ndị ọzọ, na akaebe nke a bụ na ụnyaahụ ụlọ ọrụ ahụ gbasaa atụmatụ nkekọrịta ezinụlọ na ọrụ ndị ọzọ ọ na-enye.
Kpọmkwem, dịka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kọọrọ site na a mbipụta na ya ukara blog, ngwa na ọrụ nke Kalịnda Google, Google Keep na Foto Google bụ ndị ahụ abanyela na ọrụ nkekọrịta a na gburugburu ezinụlọ.
1 Kedu ihe ọhụụ na ịkekọrịta Google
2 Esi rụọ ọrụ ezinụlọ
Kedu ihe ọhụụ na ịkekọrịta Google
Dị ka ozi ụlọ ọrụ ahụ nyere, site ugbu a gaa n'ihu ịmepụta otu ezinụlọ na Kalinda Google ga-emepụta ihe na-akpaghị aka «Kalenda ezinụlọ» A ga-ekerịta ya na nke ndị niile nọ n'ezinụlọ ga-enwe ike ịdebe ihe omume otu dịka ịga nri ezinụlọ, agbamakwụkwọ, njem ngwụsị izu ma ọ bụ mmemme ezinụlọ ọ bụla.
Njirimara ohuru ohuru na Google Debe ya na-arụ ọrụ yiri nke ahụ. Iji mee nke a, onye ọ bụla n'ime ndị otu ezinụlọ ga-emerịrị ya tinye otu ndi ezinulo dika ndi ntinye aka na ederede obula, nke ga - enyere ndị otu niile aka idezi ma mee mgbanwe na ndepụta ịzụ ahịa, ndenye aha ime, ịhazi ebe ị ga-aga eleta na ezumike ọzọ, na ihe ndị ọzọ. Mgbe ekesara ederede sitere na Keep dị ka ezinụlọ, akara ngosi nke ụlọ nwere obi n'ime ya ga-apụta n'akụkụ ya.
N'ikpeazụ, na Foto Google, nhọrọ ọhụrụ "Otu Ezinaụlọ" na Share menu na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta foto ahọpụtara na ndị ezinụlọ niile n'otu aka.
Esi rụọ ọrụ ezinụlọ
Iji jiri ọrụ nnabata ezinụlọ ọhụrụ, ọ dị mkpa ịtọlite ​​Nchịkọta Ezinụlọ na Google Play. Maka nke a ị ga-:
Mepee ngwa ngwa Play Store
Pịa akara aka ekpe nke elu nwere ọnya atọ dị larịị nke na-enye gị ohere na menu.
Họrọ Akaụntụ → Ezinụlọ → Deba aha iji mepụta mkpokọta ezinụlọ.
N'ihi ya, ndị ọrụ nwere ike Ekekọrịta ngwa, egwuregwu, ihe nkiri, usoro, na akwụkwọ ndị azụtara site na Playlọ Ahịa Google site na mmadụ ise ndị ezinụlọ iji ọba akwụkwọ Google Play. Iji mee ka ha sonye n'òtù ahụ, onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ kwesịrị ịgbaso otu usoro ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na agbakwunye atụmatụ ezinyere ezinụlọ ọhụrụ na Kalịnda, Debe na Foto
Samsung na Apple nọgidere na-efunahụ ụlọ ọrụ ndị China
Musicolet, fechaa music player, na-enweghị mgbasa ozi ma ọ bụ na-eji ngwa ịzụrụ